Arzantina: 35 taona Aty Aoriana, Ho Ela Velona Anie Ny Fetibe Karnavaly! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2011 12:22 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, srpski, Italiano, 繁體中文, 简体中文, македонски, Español
Zava-mahazatra ny firesahana mikasika ny fetibe fanao any amin'ireo firenena hafa any Amerika Latina , tahaka ny firesahana ny politika, ny salsa ary ny rumba, kanefa any Arzantina, efa taona maro lasa izao dia sokajiana ho efa tantara taloha ny fanaovana fetibe karnavaly. Ny Jona 1976, nandritra ny fitondrana jadon'ny miaramila, ny maha-andro tsy fiasana ny fetibe dia nofoanana tamin'ny lalàna 21329 mamaritra ireo andro tsy fiasana . Namboarina izany lalàna izany tamin'ny taona lasa teo, ka amin'ity taona ity ary hankalazaina ny fetibe ny 7 sy 8 Martsa izay tsy hiasana any Arzantina.
Noho ny fandraràna tamin'ny 1976, maro ireo fomban-drazana very: Vita hatreo ny fialantsasatra, ireo fampisehoana an-dalambe, fanipazana rano an'ireo mpandalo eny an-dalambe na ireo balaonina feno rano sy ireo barika feno rano. Na izany aza, maro ireo tanàna eraky ny firenena nanao fetibe toy ny any Gualeguaychú [es], Corrientes [es], Salta ary Humahuaca [es], sy ireo hafa. Tsy nanary ny fomban-drazana i Buenos Aires ary nanohy ny “murgas,” na koa ilay fantatry ny be sy ny maro amin'ny anarana hoe “comparsas” (ireo vondrona mpanao fetibe an-dalambe) any amin'ny firenen-kafa. Kanefa mbola tsy manana daty i Arzantina — ho andro ofisialy natokana tsy hiasana — mba tsy hahalany laza ireo fankalazàna.
Tamin'ny taona 1983, tamin'ny fiverenan'ny demokrasia tany Arzantina, nanomboka niverina ny murgas [es] malaza any Arzantina, nefa mbola tsy napetraka ihany izayandro fialantsasatra ho an'ny fetibe.
Ny Novambra 2010, nanamboatra ny lalàna 21,329 ny Filoha Cristina Fernandez de Kirchner ary niverina indray ny fifaliana, indrindra ireo izay nihevitra hamerina ireo fankalazana ny fetibe, tahaka ny Fikambanana MURGAS [es] izay nahatratra ny tanjony taorian'ireo hetsika miisa efatra ambinifolo nataony:
Ireo bilaogy tahaka ny La república de las palabras [es] (Ny Repoblikan'ny teny) dia naneho ny hafaliany momba ny fiverenan'ireo andro fialantsasatra ho fankalazana ny Fetibe. Maro ireo gazety any Amerika Latina, tahaka ny El Comercio any Ekoatora [es], Prensa Libre any Goatemala [es], ary El Deber any Bolivia dia samy nanambara ilay fiverenana.
Raha dinihantsika fa 35 taona izay no lasa hatramin'ny nanafoanana ireo andro fankalazana ny Fetibe, midika izany fa maro ireo taranaka tsy mahalala ny dikan'ny fankalazana, na ny anton'ny fifaliana sy fankalazana tahaka izany. Na mety nieritreritra izy ireo fa tsy maintsy mankany Brezila ianao raha te-hiaina ny Fetibe. Perla A. ao amin'ny bilaoginy manokana dia manoratra momba ireo fahaizana ara-tetiarana izay ianaran'ny tanora mikasika ny fankalazana avy amin'ny alalan'ireo tantara tantarain'ny raiamandreniny na ny renibe sy raibeny azy ireo: